Dhaabbileen Raashiyaa Ityoophiyaatti bobba’uuf fedhii qabaachuus ibsan – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Onkololeessa 11, 2012 (FBC) – Koorporeeshiniin Baaburaa Raashiyaa hojiilee bu’uuraalee misoomaa Ityoophiyaarratti hirmaachuu kan barbaadu ta’uu beeksise.
Ityoophiyaatti Ambaasaaddarri Raashiyaa Iivgeen Tarkihiin akka beeksisanitti, Koorporeeshiniin Baaburaa Raashiyaa hojiilee bu’uuraalee misoomaa Ityoophiyaarratti bobba’uu ni barbaada.
Ambaasaaddarichi Ityoophiyaa fi Raashiyaan dameewwan addaddaarratti tumsaan hojjechaa jiraachuu beeksisaniiru.
Dhaabbileen Raashiyaa Ityoophiyaatti bobba’uuf fedhii qabaachuus ibsaniiru.
Qonna, indaastirii fi tuuriizimii Ityoophiyaa cimsuuf bu’uuraaleen misoomaa qulqullina qabanii fi sadarkaa isaanii eeggatan murteessaa ta’uu ibsanii, haaluma kanaanis misooma baaburaatif xiyyeeffannaan kennamuu ibsaniiru.
Koorporeeshiniin Baaburaa Raashiyaa diriirsa bu’uuraalee misoomaa Ityoophiyaarratti bobba’uu akka barbaadu ibsaniiru.
Ityoophiyaan humna nuukleeraa nageenyaf fayyadamuuf Koorporeeshinii Roosaatoom Raashiyaa waliin qindoominaan hojjechuuf yaaduu ibsanii, waliigalteenis magaalaa Soochiitti ni mallatteeffamaan akka eegamu ibsaniiru.
Waliigaltichaan boodas humni nuukleeraa qonna, yaala, anniisaaf akka oolu tumsaan ni hojjetama.
Raashiyaanis wiirtuu qorannaa nuukleeraa Ityoophiyaatti kan bantu ta’a.
Qonna Ityoophiyaa guddisuuf dhaabbileen Raashiyaa meeshaalee qonnaa, xaa’oo fi teeknooloojii dhiyeessuu akkasumas, beekumsa ceesisuuf fedhiin jiraachuu ibsaniiru.